Isu takagadzirira kune avo vanoda kudzidza zvikoro zvemitauro yeGerman muBerlin, Germany. Yakanakisa Kosi yeGerman muBerlin Tinokurudzira kuti nyatsoongorora chinyorwa chedu chakanzi. Nenyaya ino, isu tichaedza kupa ruzivo nezve yakanakisa mari yezvikoro zvemitauro mitatu muBerlin, iyo inopa dzidzo muchiGerman, inowana zvibodzwa zvakakwira zvinoenderana nezvakataurwa nevadzidzi uye panogara zvirinyore.
Module Course Berlin - F + U Chikoro cheMitauro
Iyo kosi yeGerman, iyo yakavhurwa mu2013, iri pakati pezvakanakirwa nekuda kwehupfumi hwayo uye dzidzo, kunyangwe iri nyowani kupfuura zvikoro zvemitauro. Muchikoro chemutauro, saizi yepamusoro yekirasi ndeyevadzidzi gumi nevashanu, uye zera reboka revadzidzi iri makore makumi maviri ekuberekwa, pamusoro pemakore gumi nematanhatu. Iyo yakazara nguva yenguva yekosi, iyo inopa kudzidziswa paMuvhuro neChishanu, inosiyana pakati pe15-16 mavhiki. Pane zvidzidzo gumi zvemaminitsi makumi mana nemashanu pasvondo.
BWS Germanlingua Berlin - kududzwa kwechiGerman
Iyo ndeimwe yeakanyanya mari mutauro makosi muBerlin. Yakavhurwa mu1984 uye inoramba ichishanda pamwe ne9 makirasi. Muchikoro chemutauro chinopa dzidzo kumatanho ese, avhareji saizi yekirasi iri 1 uye yakakwira 2. Chikoro chemutauro, chine avhareji zera iri pakati pe16-25, chinoita kuti boka ritange kune vatsva Muvhuro wega wega. Iyo kosi yenguva yacho inosvika kusvika kumavhiki e48 muhuwandu uye zvinoonekwa kuti kune 45 zvidzidzo zve3 maminetsi pasvondo. Chikoro chemutauro, icho chinoisa zvidzidzo paMuvhuro neChishanu chevhiki, chinogona kunge chiine mamwe mazororo akafanotarwa uye zvingave zviri nani kuti usasarudze zvidzidzo pamazuva ano. Paunofunga kusarudza chikoro chemutauro, zvinobatsira kudzidza nezvehoridhe zvisati zvaitika.
GLS ChiGerman Mutauro Chikoro Berlin - Standard Kosi
Chikoro chemutauro muBerlin chakavhurwa mu1983 uye ikozvino chinoshanda nemakumi mashanu emakirasi. Inoshanda munzvimbo dzese dzedzidzo yekune dzimwe nyika sekutaura, kuteerera, kunyora, kuverenga, kududza, girama uye mazwi. Saizi yekirasi mumakirasi ndeye 50, yakanyanya gumi nemaviri. Chikoro chemutauro, icho chine vadzidzi vari pakati pemazera e8-12, chinopa zvidzidzo zveboka remangwanani. Iyo yekudzidzira nguva inosiyana pakati pe 18-27 mavhiki uye boka idzva rinovhurwa Muvhuro wega wega kune vanotanga. Pane zvidzidzo makumi maviri nemaminitsi makumi mana nemashanu pasvondo.